Helicopterka - Wikipedia
Helikopter waa nooc ka mid ah dareenka oo kor u kici karo iyo xoojin ayaa laga helaa raajiyayaal. Tani waxay u oggolaaneysaa helikabtarrada in ay ka soo baxdo oo ay dhulka u rogto, si ay u soo jiidato, iyo inay duulaan, horey iyo gadaalba. Qodobadan waxay u oggolaanayaan helikabtarrada in loo isticmaalo aagagga cidhiidhiga ah ama kuwa la go'doomiyo ee diyaaradaha garabka ah iyo noocyo badan oo VTOL ah (diyaaradaha tooska ah iyo dhulalka) diyaar ma noqon karaan.
Helicopter-yada Kelmadaha Af-Ingiriisiga waxaa laga soo qaatay erayada Faransiiska hélicoptère, oo ay ku qoran tahay Gustave Ponton d'Amécourt 1861, kaas oo ka yimid Giriigga Giriigga (Hirsi) "Helix, Spiral, Xakameyn", iyo "Pteron (πτερόν)" Luqadaha Ingiriisiga ah ee helikabtarka loogu talagalay helikabtarrada waxaa ka mid ah "chopper", "copter", "hel", "hel", iyo "xaglaha".
Maqaal dhamaystirans: Aircraft engine and Turboshaft
Helikopter ayaa la sameeyay isla markaana la dhisay qarnigii ugu horreeyay ee duulimaadkii, iyadoo Focke-Wulf Fw 61 ay ahayd helicopterkii ugu horreeyay ee hawl-galka 1936-kii. Diyaarad helicopter ah ayaa gaartay wax soo saarka xadidan, laakiin ma aysan aheyn ilaa 1942-kii in helicopter uu qorsheeyay Igor Sikorsky Wax soo saarka miisaanka, oo leh 131 diyaaradood oo la dhisay.
In kasta oo naqshadihii ugu horeeyay ay adeegsadeen wax ka badan hal raajo oo waaweyn, waa hal raajo oo weyn oo leh qaabka lafa-daboolka lafdhabarta ee lafa-daboolka kaas oo noqdey qaabka ugu wanaagsan ee helikabtarta helikabtarta. Diyaaradaha Tandem rotor ayaa sidoo kale isticmaala adeegsiga iyada oo ay ugu wacan tahay awooddooda mushaharka culus. Diyaaradaha helicopters, diyaaradaha tiltrotor, iyo helicopters-ka ayaa dhamaantood duulaya maanta. Helicopter-yada Quadcopter waxay bilowday 1907-kii Faransiiska, iyo noocyo kale oo ka mid ah shidaal-baariseed ayaa loo sameeyay habab gaar ah sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Helicopterka&oldid=199941"
Last edited on 6 Abriil 2020, at 06:03
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Abriil 2020, marka ee eheed 06:03.